Toerana Google> Pejy Google Plus (ho an'ny ankehitriny) | Bilaogy MarTech
Alatsinainy, Novambra 14, 2011 Alatsinainy Oktobra 26, 2020 Kevin Mullett
Tsy ho lahatsoratra hafa ity izay mamporisika anao hanangana ny anao Pejy Google Plus ho an'ny orinasa eo noho eo, ary tsy hanome anao torolalana momba ny fanaovana izany. Ekena fa izany no antenaiko naroso tamin'ny famoahana ny Google+, ary na eo aza ny fiomanana amin'ny webinar ho amin'izany, dia tsy maintsy manolotra safidy hafa aho… izao.
Maninona raha misitrika fotsiny? Na dia tokony hanaiky aza isika fa mbola vaovao ny pejy Google+, dia tonga amin'ny faritra lehibe maro izy ireo. Ireto misy vitsivitsy fotsiny:
Toa tsy misy izany fiarovana rehetra amina toerana hisorohana olona tsy hamorona pejy misy ny anaranao.
ihany admin iray isaky ny pejy avela, ary tsy misy rafitra famindrana mipetraka izao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha miala amin'ny Cirrus ABS aho dia tsy afaka mamoaka ny fibaikoako ny pejy misy marika Cirrus ABS (na dia nilaza aza i Google fa miasa amin'ity olana ity).
Mifanohitra amin'ny TOS ny mamorona kaonty sandoka, noho izany, raha ara-teknika dia tokony hanangana kaonty Google+ ny tena olona iray. Mampiseho olana izany rehefa tsy ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny orinasa, ny solontenan'ny lalàna na ny tompony no mitantana ny fantsona sosialy. (jereo ny teboka teo aloha)
Miseho amin'ny valin'ny motera fikarohana (SERPs) ny pejy Google+ fa tsy milahatra tsara ho an'ny karoka tsy misy marika (mbola).
The rafitra fampandrenesana dia ihomehezana tsotra izao. Tsy misy fampandrenesana hita maso fa nisy olona nifandray tamin'ny pejinao raha tsy hoe manokatra ny pejy marika ianao. Tsy mandefa fampandrenesana mailaka akory i Google+. Ny boaty mena an'ny bar Google dia tsy mampiseho afa-tsy ny fampandrenesana manokana an'ny admin.
Manodidina ny marika miaraka amin'ny pejin-marika tantananao sy ny kaontinao Google+ manokana dia mitaky eritreritra be loatra.
Toy izany koa, boribory ny marika notantaninao mitaky contortion nomerika. Ary mazava ho azy fa tsy azonao atao ny manisy faribolana ny kaonty Google+ anao manokana avy amin'ny pejin'ny marika mandra-pahafantatrao ny fomba hanodinana ny pejin'ny marika voalohany. Misafotofoto ve?
Azoko atao ny manohy manontany hoe maninona no misy lisitry ny menio Games ao amin'ny pejinay marika, saingy raha ny marina, tsy misy fiatraikany amin'ny volavolan-kevitra momba ny famoronana pejy Google+ izany; mahatonga ny nav ho tsy hampiasa olona fotsiny izany. Ny tiako holazaina dia ny fiheverana fa misy hetsika hafa misy lanja avo kokoa amin'ny marketing, angamba tokony avelantsika hanana nofo bebe kokoa amin'ny Google io.
Manoro hevitra aho fa ny orinasa dia alao antoka aloha ny hitaky sy hanatsara ny pejy Google Place alohan'ny momba ny tenany amin'ny pejy Google+. Fantatro fa vaovao sy mamirapiratra ary mety hivadika fomba tsara hifandraisana amin'ireo mpanjifa ny Google+, saingy efa misy rakitsoratra lava be momba ny tombontsoa mifandraika amin'ny pejy Google Place izay namboarina tsara. Raha mbola tsy nitaky ianao, na te hanavao ny pejy Google Place anao, mankanesa any Toerana Google.
Efa nesorina ve ny Google Place anao? Ny safidiko faharoa dia ny fananana toerana hafa toa an'i Yelp sy Bing. Ataovy ao an-tsaina fa Siri, amin'ny iPhone 4s vaovao, dia mampiasa Yelp. Bing dia manana fanandramana fikarohana finday marobe, ary satria ny valin'ny fikarohana Yahoo dia avy amin'i Bing, izany dia manodidina ny 30% ny fikarohana BingHoo. Mba hanamorana izany dia andao haka ireo lisitra rehetra eto an-toerana ireo getListed.org.
Tags: google toeranaGoogle Pluspejy miampy googleGoogle +SEOSocial Media Marketing
Kevin dia mpamorona tranonkala voaporofo, mpivarotra an-tserasera, mpandahateny, bilaogera vahiny ary mpamorona mari-pankasitrahana manana traikefa an-tranonkala maherin'ny 13 taona sy tranokala 300 natao ho azy. Kevin dia nanararaotra ny traikefa 15 taona momba ny varotra sy ny varotra niaraka tamin'ny filan'ny media sosialy, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny famolavolana ary ny fampiasana azy tsara hanampiana ny mpanjifa Cirrus ABS hahomby amin'ny Internet.
Doka sy fiverenana amin'ny fampiasam-bola
14 Nov 2011 tamin'ny 2:44 PM
Lahatsoratra tsara! Ny tena mampihomehy dia ny vao hitako androany fa nisy olona nametraka pejy “Google Analytics” ary manana marika momba izany aza i Google. Jery ​​akaiky kokoa; na izany aza, mampiseho fa nisy olona naka an-keriny tsotra fotsiny ny marika Google. Mampihomehy loatra! Ary karazana moana izay tsy namboarin'i Google ny pejiny manokana rehefa nandeha mivantana niaraka tamin'ny endri-javatra izy.
14 Nov 2011 tamin'ny 3:58 PM
Hadinonao ny iray, ahoana no tsy nampifandraisin'izy ireo ny pejy amin'ny marika marika G + 🙂 Fitiavana getlisted.org (noho ny soso-kevitra teo alohanao)
14 Nov 2011 tamin'ny 8:59 PM
Tsy maintsy nijanona tany amin'ny toerana hafa Chris aho. Navelako ihany koa ny fanesorana ireo URL tsy misy dikany, ny fetra faribolana olona / marika 5000, ary ny maro hafa.
Mar 24, 2012 ao amin'ny 12: PM PM
ru azo antoka ny momba ny 5000 plpl ?! noheveriko fa ny facebook ihany no manana an'io fetra io! saika azoko antoka!
14 Nov 2011 tamin'ny 4:00 PM
Ny eritreritro, Kevin! Na dia nahafinaritra ahy be aza ny nanangana pejy marika G + ho an'ny ahy Bilaogy Woodclinched, Tsy mbola nanolotra pejy G + ho an'ny orinasa aho tamin'izay (satria tsy manana na inona na inona very aho amin'ity bilaogy ity). Fantatro fa mankasitraka an'i Google foana aho amin'ny alàlan'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny sasany amin'ireo vokatra beta, saingy ity dia beta kely loatra ho an'izay manana tsatòka amin'ny fisiany SM.
14 Nov 2011 tamin'ny 8:06 PM
Misaotra betsaka amin'ity lahatsoratra ity Kevin! Raha tsy teo ianao dia tsy ho naharaka ny lampihazo mihitsy aho… ianao ROCK.